Fashion -ka Adduunka: Doorka Taiwan iyo Sri Lanka ee dhaqanka adduunka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Sri Lanka » Fashion -ka Adduunka: Doorka Taiwan iyo Sri Lanka ee dhaqanka adduunka
Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! • Wararka Fashion • Wararka Sri Lanka • Wararka Jebinta ee Taiwan
Bishii Oktoobar 6-deedii, Toddobaadka Fashion-ka Taipei wuxuu si rasmi ah u daahfuray “Fashion of Our Time,” oo ah bandhig u horseeda dhagaystayaasha in ka badan nus qarni xusuusta moodka Taiwan iyada oo loo marayo muuqaalada dhabta ah iyo sheekooyinka sawirrada.
Toddobaadka Fashion-ka ee Taipeh ayaa sidoo kale soo bandhigi doona shaqooyin asal ah oo ay sameeyeen naqshadeeyayaasha reer Taiwan ee caanka ah, iyagoo soo bandhigi doona sida waayihii kala duwanaa u saameeyeen warshadaha moodada gudaha iyo sida moodku uga muuqday Taiwan xilliyadan. Waxaa soo kafaalo qaaday Wasaaradda Dhaqanka, Bandhigga Fashion -ka Wakhtigayagu wuxuu ka soo bilaabmay 1950 -meeyadii, kaas oo ahaa dahabka dahabka ee warshadaha dharka ee Taiwan, illaa iyo xilligii casriga ahaa.
Iyada oo la soo saarayo muuqaallo taariikhi ah, bandhigyo mood, iyo tiirar sharraxaad leh, daawadayaashu waxay awood u yeelan doonaan inay si fiican u fahmaan taariikhda warshadaha moodada Taiwanese, iyo sidoo kale duruufaha dhaqan iyo bilicsanaantooda.
“Naqshadayaasha jiilalka kala duwan, oo wajahaya caqabado waqtiyo kala duwan iyo xoojinta sii kordheysa ee tartanka suuqyada caalamiga ah, waxay had iyo jeer ilaalin jireen xamaasad aan la joojin karin xagga moodka,” ayuu yiri Florence Lu, Curator of History Fashion Taiwan.
Mowduuca mawduuca ee Fashion -ka Wakhtigayagu wuxuu ku martiqaadayaa soo -bandhigayaasha inay ku safraan meel bannaan iyo waqti si ay ugu laabtaan waayihii hore ee moodada Taiwanese. Laga soo bilaabo warshadaha dharka dhagaxa ee 1950 -meeyadii ilaa maanta isbadalka dhijitaalka ah ee warbaahinta moodada, bandhiggu wuxuu muujinayaa sida naqshadeeyayaasha maxalliga ah iyo summaddu u leeyihiin oo ay u sii wadaan adeegsiga moodada si ay u qeexaan doorka Taiwan ee dhaqanka adduunka.
Sidoo kale soo bandhigista Bandhiggeeda Wakhtigayaga, Toddobaadka Fashion -ka ee Taipei ayaa sidoo kale qabtay xafladdii 35 -aad ee Abaalmarinta Naqshadda Fashion -ka Taiwan oo ay martigelisay Xafiiska Horumarinta Warshadaha, Wasaaradda Arrimaha Dhaqaalaha 6 -dii Oktoobar.
Ku dhawaad ​​450 kaqeybgale oo ka kala yimid 18 dal oo ku kala baahsan Yurub, Ameerika, iyo Aasiya, 12 rookies fashion ayaa lagu soo bandhigay masraxa bandhigga firfircoon ee dhacdada.
Abaal-marinta kaalinta koowaad waxaa u galay Gajadeera iyo Ruwanthi Pavithra oo ka yimid Sri Lanka shaqadooda “Farshaxanka waarta/Dharka iyo Farshaxanka Dhaqanka”. Abaalmarinnada kaalinta labaad waxaa galay Yeh, Yu-Hsien shaqadiisii ​​“Mirage” iyo Chen, Ching-Lin ee “Xaggee bay ubaxyadii oo dhami tageen.” Toddobaadka Fashion-ka Taipei wuxuu soconayaa hadda illaa Axadda, Oktoobar 17-keeda.